10 Magaalooyinka Ugu Fiican Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Magaalooyinka Ugu Fiican Yurub
Yurub waxay had iyo jeer ina xasuusisaa Hollywood hore iyo boqornimadii. Sayidka, bir jabis mid ka mid ah magaalooyinka layaabka leh ee Yurub had iyo jeer waxay ku saabsan tahay waxyaabaha quruxda badan ee nolosha. Cuntada wanaagsan, dhaqanka, iyo taariikh leh qalqal qaas ah iyo qaab dhismeedka neefta naga qaada, waa uun wax yar oo ka mid ah waxyaabaha ka dhigaya Yurub riyooyinka.
Laga soo bilaabo xeebaha Nice ilaa bar cirka ee Vienna, our 10 fasaxyada magaalada ugu fiican Yurub waxay dhaafi doonaan waxyaabaha aad ka fileyso.
Safarka Tareenka waa Wadada U Haboon ee loo Safro Yurub. Maqaalkani waxa uu ugu qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
1. Magaalooyinka Ugu Fiican Yurub: Vienna, Austria
Haddii kaliya loogu talagalay Sachertorte, shukulaatada caadiga ah ee jirdilka, waa inaad si xaqiiqo ah uga fiirsataa Vienna kulanka nasashada ee Yurub. Bartamaha-usbuuca ama dhammaadka usbuuca, Vienna waxay bixisaa aragtiyo badan oo ay ku qancaan iyo aragtida magaalada ee neeftaada kaa qaadi doonta.
Ka bilow Kahlenberg halkaas oo aad ka arki karto ilaa iyo inta ay socoto Carpathians-ka Slovakia. Kadib u sii gudba jasiiradda aan dabiiciga aheyn ee Danube si aad uhesho uguna socoto magaalada Vienna ilaa fagaaraha Franziskanerplatz si aad ugu cabto qaxwada Viennese kaarka. Maalinta ku xir burooyinka isweydaarsiga 'Das Loft sky bar' oo ku dhex milma dadka maxalliga ah.
Kuwani waxyar baa ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ee laga sameeyo Vienna haddii aad rabto in aad ku qaadatid fasaxa magaaladaada ee Vienna sida Viennese run ah.
Waxay ku taal Switzerland iyo Jarmalka, u dhow gobolka quruxda badan ee Rhine ee Faransiiska, Colmar waa magaalo hufan oo qurux badan. Tani waa sababta magaaladan yar ay u tahay midda ugu wanaagsan ee magaalada u gooysa Yurub. Thanks to cabirkeeda yar iyo hodanka ah 1000 Taariikhda Yurub ee ku dartay jawigeeda sixir, runti waad ku dhici doontaa jacaylka aragtidaada hore waxaadna kusoo noqon doontaa jiritaan dheer.
Isla marka aad timaadid Colmar waxaad isla markiiba dareemi doontaa inaad ku soo biirtay sheeko carruureed. Sida ugufiican ee looyarkaaga birifaaca ee Yurub waa inaad jidadka aado oo aado meelaha yar ee Venice, jooji a galaas oo khamri ah, takhasuska Alsace.
Colmar waa kufiican nasashada magaalada kirismaska ​​wuxuuna aad u qurux badan yahay usbuuca guga.
Paris ilaa Colmar oo Tareen ah
Zurich to Colmar by Tareenka
Stuttgart to Colmar by Tareenka
Luxembourg ilaa Colmar by Train
3. Magaalooyinka Ugu Fiican Yurub: Venice, Italy
Buundooyinka, guryo aan caadi ahayn oo midab leh, carafta pizza iyo Aperol, samee Venice a meel aan ku riyoodo loogu talo galay in magaalada loo nasto ee Yurub. Cabbirkeeda yar, matxafyada, iyo indhooleyaashu waxay kaa dhigi doonaan inaad mashquul ku ahaato nasasho toddobaad iyo dheer oo gaaban. Had iyo jeer waxaa jira piazza yar oo u dhow geeska xarunta mashquulka badan, halkaad dib ugu fadhiisan karto, leeyihiin cappuccino iyo panini, ama naftaada u daawee Pizza delicious foornada qadiimka ah.
Haddii aad qorsheyneyso inaad soo dejiso usbuuc dhammaad leh, Jasiiradaha quruxda badan ee Burano iyo Murano waa uun doon lagu raaco.
Milan ilaa Venice tareenka
Bologna ilaa Venice tareenka
Rome ilaa Venice tareenka
4. Magaalooyinka Ugu Fiican Yurub: Fiican, France
Majiraan wax nasasho ah oo aan ahayn safar dhaqso ah oo aad ku tagto Faransiiska Riviera usbuuca dhamaadkiisa. Quruxda quruxda badan ee Nice iyo xeebteeda xeebta ayaa ah meel wanaagsan oo loogu tago nasashada magaalada xagaaga ee lagu xasuusto ee Yurub.
Cote D'Azur waa meesha xeebaha ugu wanaagsan ee Nice iyo La Tour Bellanda looma seegi doono shaashaddaas oo kale. aragtida iyo qorrax dhaca. Nasashada magaalada ee Nice waxay ku saabsan tahay nolol qurux badan iyo cunno wanaagsan. Sidaas, Sabti-axad ee Nice waxay kaa dhigi doontaa inaad dareento boqortooyo.
Waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca marka qof ka fikiro jabitaan magaalada Amsterdam waa degmada nalalka cas, baaskiilka, iyo kanaalada. laakiin, magaaladan yar ee Yurub waxay leedahay waxbadan oo ay bixiso.
Xilliga guga Amsterdam waxay ubaxaysaa midabo midabo leh meel walbana aad u jeceshahay waxay u egtahay kaadhka boostada. Kanaalada, doomaha, baaskiilada, iyo ubaxyadu waxay sugayaan inay midabeeyaan albumkaaga sawirka. Ka bilow matxafka Tulip ka dibna u gudub Jordaan, maqaayadaha kafateeriyada iyo maqaayadaha yaryar ee deegaanka ama Beestooyinka Oost iyo Rembrandt ee a raaxo iyo raaxo.
Brussels ilaa Amsterdam oo uu tababaray
London ilaa Amsterdam by Train
Berlin ilaa Amsterdam oo Tareen ah
Paris illaa Amsterdam oo uu tababarayo
6. Magaalooyinka Ugu Fiican Yurub: Cinque Terre, Italy
Cinque Terre waa koox koox ah 5 midab leh iyo tuulooyin qurux badan waxayna xaqiiqdu noqon doontaa mid ka mid ah birimooyinka ugu fiican magaalada ee aad noloshaada ku qaadato. Xilliga dayrta iyo jiilaalka, Cinque Terre waa qurux hurdo leh, laakiin xilliga xagaaga waa sida magaalada burburtay oo kale. Ugu weyn faa'iidada Cinque Terre Marka la barbardhigo magaalooyinka Yurub waa inaad si fudud u safri karto oo aad u booqan karto 5 tuulooyin ka yar 3 maalmood. Sidaa darteed, safarka tareenka ee Cinque Terre waa fududahay oo raaxo badan oo aad ugu safri karto tuulooyinka mid ka yar 20 daqiiqo.
Adigoo ku fadhiya meelaha dhagaxyada leh iyo iska dhaafida badda xeebaheeda quruxda badan, Cinque Terre waa mid layaab leh. Waxaa intaa dheer, waxaa jira kafateeriyayaal badan, maqaayado, aragtiyaha, iyo wadooyinka hortayada si ay ugu haboonaato dhadhan kasta. Sidaas, haddii aad rabto inaad ku nasato quraarad khamri ah oo ku taal beero canab ah oo deegaanka ah ama ka hel adventurous, markaa bir jabis magaalada Cinque Terre ayaa kuu fiican adiga.
La Spezia ilaa Manarola tareenka
Riomaggiore ilaa Manarola tareenka
Sarzana ilaa Manarola tareenka
Levanto ilaa Manarola tareenka
Beer beero, jardiinooyinka cagaaran, aragtiyo yaab leh, waxayna ku dadaaleysaa inay ku dhex wareegaan, ka dhig Prague magaalada ugu fiican ee ka jabisa Yurub. Prague waxay hoy u tahay qalcado cajiib ah, taariikhda, suuqyada maxalliga ah, iyo kafateeriyadaha meesha aad ka kaaftoomi karto qaxwada iyo cajiin aad ku tegi karto oo aad ku kululeynkartid mid ka mid ah jardiinooyinkiisa badan. Sidoo kale, waxaa jira meelo badan oo qarsoon iyo muuqaallo muuqaal ah oo lagu sahamin karo lagana fogaado dadka dalxiisayaasha ah.
Prague waa meel caan ka ah magaalada inay ka jabto Yurub, in kasta oo ay dadku si weyn u buuxsan karaan sanadka oo dhan. laakiin, wali waxay u qalantaa booqasho isbuuc-gaaban. Waqtiga aad ka dejiso tareenka, jacaylkaaga waad ku dhici doontaa picturesque magaalada.
8. Magaalooyinka Ugu Fiican Yurub: Brussels, Belgium
Haddii aad leedahay ilig macaan, waxaad gabi ahaanba lahaan doontaa fasax birifaad cajiib ah magaalada Brussels. Brussels waxbadan ayey ku wadaagi karaan oo ku tusi karaan, sida ay u jecel yihiin shukulaatada caanka ah ee adduunka iyo waffles. Intaa waxaa dheer, in ka badan 100 madxafyada ayaa kugu sugaya Brussels. Ka dib markaad booqato kuwa ugu wanaagsan waxaad aadi kartaa rue Danseart si aad u hesho qaniinyo si aad wax uga cunto makhaayadaha ugu fiican. Qurux kale oo ku yaal Brussels waa soo jiidasho leh meelaha Sainte-Catherine iyo hilibka dhaqanka iyo Chatelain.
Brussels waxay ku faraxsanaan doontaa inay kugu marti-qaaddo soo dhoweyn gaaban ama waqti dheer dhammaadka usbuuca. Waa magaalo qurxoon oo leh soojiidasho iyo qaab uu qof kasta oo da 'kasta la xiriiri karo.
Antwerp to Brussels by Tareenka
Amsterdam ilaa Brussels by Train
Paris ilaa Brussels by Train
Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Jarmalka ayaa ah meelaha ugu wanaagsan ee loogu talo galay in lagu nasto magaalooyinka Yurub. Hamburg waa hoyga dekedaha ugu weyn dalka iyo harooyinka gudaha iyo gudaha ee Outer Alster, meeshaad ku raaxeysan karto a doon aad u cajiib badan.
Planten un Blomen waa beero botanic leh aragtiyo waaweyn iyo meelo sawirro laga helo. Sidaas, sifiican ayaad u xirxirtaa kamaradaada oo waxaad isku diyaarin kartaa qaar ka mid ah darbooyin waa weyn oo aad la wadaagi karto fasaxaaga cajiibka ah ee Hamburg.
Hamburg ilaa Kobanheegan oo ay raacdo Tareenka
Zurich ilaa Hamburg by Tareenka
Rotterdam ilaa Hamburg by Train
10. Magaalooyinka Ugu Fiican Yurub: Budapest, Hungary
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu sameeyo Budapest waa in doon lagu raaco webiga Danube. Sida ugu wanaagsan ee loogu qancin karo magaalada iyo qaab dhismeedka Budapest waa doon. Iyada oo leh waxqabadyo waaweyn oo bannaanka iyo gudaha ah, Magaalada caasimada ah ee Hungary ayaa dhibco sare leh 10 magaalooyinka ugu fiican ee jabsanaya Yurub.
Baadhista buundooyinka, booqo qubeyska kuleylka caadiga ah, oo dhadhamiya cunnada cunnida Huaariga ah waa waxyaabo ay tahay inaad sameyso si aad u dareento degmo Budapest ah. Intaa waxaa dheer, Hubso inaad booqato Matthias Church, Kalluumeysiga kalluumeysiga, iyo baarlamaanka aragti qorrax ka soo baxa magaalada.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino helitaanka tikidhada tareenka ugu raqiisan mid kasta oo ka mid ah qurxinta magaalada ee qurxan ee aad ku talojirto inaad qaadato!
Ma waxaad dooneysaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "10 ugu fiican Magaalada Breaks ee Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-city-breaks-europe/ የሰማይ አካላት– (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa jidadkeena tareenka ugu caansan - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / in ay / de ama / es iyo luuqado badan.
magaalo kacsi magaalabreakeurope magaalada summertraintravel TravelBudapest safarhamburg SafarkaPrague